Sanooyinkii la soo dhaafay waxay ummadda soomaaliyeed ka dhergeen jagada madaxweyneha jamhuuriyadda Soomaaliya, oo toban sannadood meelahaas ayaa waxaa dalka Soomaaliya madaxweynenimadiisa lagu tilmaamay rag badan. Waxaa ragga jagadaas weyn sheegtay ama lagu sheegay ka mid ah Cali Mahdi, oo ay xoogaa soomaalida ka mid ah oo ay siyaasiyiin caan ahi ka dhexmuuqdeen madaxa ugu duubeen cimaamad cad oo madaxweynenimo, wuxuuna muddo dheer naftiisa qaaliga ah ku maaweelinayey in uu hayo xilkii ugu weynaa xilalka dawladnimo ee Soomaaliya.
Markii uu Cali Mahdi daaley oo uu calafkii uu Rabbi u qoray helay baa jagadii madaxweynenimada waxaa kala wareegey Alle ha u naxariirto ee jeneraal Maxamed Faarax Caydiid. Waxaa jagadaas u doortay dad soomaali ah oo xagga tirada ka badnaa kuwii doortay Cali Mahdi, waxayna doorashada degdegta ahi ka dhacday gudaha Soomaaliya. Qorshaha jeneraalku wuxuu ahaa in uu jagada hayo ilaa uu ka dhimanayo, sidii bayna noqotay oo Maxamed wuxuu madaxweynaha Soomaaliya sheeganayey tan iyo intii uu xagga aakhiro uga guurayey.
Jagadaas mucjisada ah waxaa dhaxlay oo si fudud ula wareegey wiil ku abtirsada ninkii ka dhintay oo magaciisa la yiraahdo Xuseen Maxamed Faarax, wuxuuna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya naftiisa ku tilmaamayey ama lagu sheegayey ilaa ay dalka Jabbuuti ka soo duushay diyaarad sidda madaxweyne afaraad. Madaxweynaha afaraad wuxuu ahaa Cabdiqaasim Salaad Xassan oo ay dad qaxooti u badani u rajeeyeen in uu noqdo madaxweyne ka mid ah madaxweynenimada la kala boobayey.
Cabdiqaasim oo aan weli ka dhergin jagadii uu sheeganayey baa waxaa dalka gudihiisa lagu qabtay shir ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen soomaali badani, waxaana jagada madaxweynenimada Soomaaliya lagu sharfay nin aanan magaciisa oo buuxa xasuusan, laakiin uu madaxayga ku haray magaca Darmaan.
Madaxweynahaas shanaad oo jamhuuriyadda Soomaaliya naftiisa ku maaweeliyey Cabdiqaasim kama uu yeelin in uu uga wareego jagada, waxaana sababta loo malayn karaa in ay jagadu xagga maaliyadda weli Cabdiqaasim u irmaanayd markii la doortay madaxweyne Darmaan, oo xagga lacagaha dartood uu Cabdiqaasim ugu faro-adaygay in aan lagala wareegin jagada.
Cali Mahdi kuma uu qabsan Caydiid markii lagu magacaabay oo waa uu u daayey madaxweynenimada, isla markaas Xuneen kuma uu qabsan Cabdiqaasim markii uu Ismaaciil Cumar Geelle la soo heshiiyey, sidaas darteedna waxaa Cabdiqaasim lagu tilmaamaa in uu yahay ninkii ugu hunguri xumaa raggaas jagada kala boobayey, maaddaama uu jagada ka fuqi waayey markii la doortay mudane Darmaan.
Haatan waxaa loo fadhiyaa shir la marayo heerkii la dooran lahaa madaxweyne lixaad, waxaana hubaal ah in jagadaas ay soomaalidu ka dhergeen oo maanta xiisihii 1991 loo qabey aan loo qabin, maxaa yeelay waxaa lagu daaley tirada madaxweyneyaasha iska soo badagurmayey iyo in aysan jagadu maxba ku soo kordhin dalka in ay uga darto mooyaane.
Waxaa la ogaadey soomaalidu in ay labo dabeecadood leeyihiin. Midda kowaad in ay jecel yihiin jagada madaxweynaha, waxaana laga yaabaa 21 sannadood oo uu dalka ku qayilayey shiikh Maxamed Siyaad Barre in loo maleeyey in ay jagadu ninkii qabta u kordhinayso in uu dadka kale xirxiri karo oo uu layn karo iyo in uu dadka iyo dalka xoolohooda iska qaadan karo. Waxaa intaas dheer in heeso lagu ammaano in kasta oo Maxamed Siyaad ammaantii iyo caydii loo geystey aysan kala yarayn, oo ay weli cay badani ku socoto asaga oo mootan.
Dabeecadda labaad oo soomaalida lagu bartay waa in aysan aqoon madaxweynaha wax lagu sameeyo, ee ay iska rabaan wax aysan garanayn, isla markaas aysan xil sidaas u weyn hanan karin. Shantii madaxweyne oo dalka Soomaaliya sheegtay sannadihii la soo dhaafay waxay ka sinnaayeen hal dabeecad, waxayna ahayd in uusan midna dalka u samayn boolis hal xaafad keli ah xataa nabaddeeda suga, taas oo ay soomaalidu ku macneeyeen in aysan madaxweyneyaashu aqoon u lahayn sida loo sameeyo, oo ay sameeyeen waxii ay yaqiinneen.
Waxay ahaayeen madaxweyneyaal yaab leh oo raalli ka ah in xaafadda ay deggan yihiin dumarka lagu qabsado/kufsado, isla markaas meel kasta oo uu nin madaxweyne soomaaliyeed sheeganayaa ka dhow yahay waxaa ku batay tuugta iyo isbaarooyinka. Mar kasta oo laga fogaado meelaha ay madaxweyneyaasha jamhuuriyadda Soomaaliya joogaan waxaa loo dhawaanayey nabad iyo xasillooni, mar kasta oo madaxweyneyaasha loo soo dhawaadana waxaa lala dersayey kufsi, dhac, tuugo, dil, daroogo iyo lacago xaaraan ah.
Maqaalkaan waxaa �khayr� loogu bixiyey in xildhibaanokusheegga wax dooranaya iyo ummadda soomaaliyeed loogu baaqo in ay doortaan madaxweyne ka khayr roon shantii hore, oo aan raalli ka ahayn in uu dalka Soomaaliya ku sii jiro sida uu maanta yahay iyo in la xishoodo oo aan la noqon xoolo iska daaqaya oo aan wax ay laqaan ma aha ee dareen iyo caqli kale lahayn.
Ujeeddada barlammaan iyo dawlad loo sameeyaa waa in ay shacabku helaan boolis ay u kala dacwoodaan, oo xukuumaddu ay dadka kala celiso iyo in ay hay�ad kastaa baahida ummadda oo loo sameeyey ku shaqayso. Sidaas awgeed markii aad wax dooranaysid ama aad wax taageeraysid macnuhu waa in aad hoggaan u samaynaysid dadkii fulin lahaa danaha aynu kor sheegnay.
Marka Soomaaliya dawlad loo samaynayo iyo marka qabiilkaaga isim loo caleemo saarayaa aad bay u kala duwan yihiin. Isimka waxaa shardi ah in uu qabiilkaaga ka dhashay, laakiin madaxda dawladda shardi ma aha in ay kula qolo yihiin. Dadka isimka caleemasaaraya oo taageerayaa waa ciddiinna keli ah, laakiin barlammaanka madaxweynaha dooranayaa wuxuu ka kooban yahay qabiillada soomaalida oo dhan. Danta isimka loo dooranayaa waa maslaxadda qabiilkaaga, laakiin madaxweynaha waxaa loo dooranayaa in uu hoggaamiyo hawl ummadeed oo la rabo uusan qof ama qolo xigsan.
Intaas iyo waxyaalo badan oo kale waxay muujinayaan in aad kala ogaatid danaha qabiilkaaga u gaarka iyo kuwa ka dhexeeya qabiilooyinka oo dhan. Markii hay�ad qaran laga hadlayo waa in aad maskaxdaada ka saartaa in uu madax ka noqdo qof aad isku qabiil tihiini. Haddii uu madax noqdo qof ka dhashay qabiil ay ciddiina islaayaan ama ay colaadi dhexmartay macneheedu ma aha in qabiilkaaga la xumeeyey. In dawlad qaran iyo barlammaan qaran la sameeyaa macneheedu waa in ay midoobaan qabiilooyinkii islaayey, taas uu macneheedu yahay in uu hoggaanka guud qaban karo qof aan kula qabiil ahayni, waayo waxaa la rabaa in hal hoggaamiye la yeesho oo uusan qabiil kastaa hoggaamiye u gaar ah lahaan si loo helo soomaali qaran ah.
In aad sidaas oggolaatid adiga oo ku faraxsan waxaa kuugu jirta xasillooni xagga nafta ah, sharaf iyo akhlaaq xagga soomaalinimada ah, kalsooni ku beeranta qabiilooyinka kale oo kula midka ah iyo in la gaaro qaran xasilloon oo ay carruurtaadu hooskiisa harsadaan.
Markii aad codaynaysid qof ama qabiil ha ka fakarin ee waxaad u codaysaa sidii lagu gaari lahaa in dhulka ay soomaalidu degaan nabad iyo midnimo loogu heli lahaa. Qof aad adigu gaar u neceb tahay haddii uu keeni karo dan soomaaliyeed waa in aad xanuunka nacaybkaaga ku qaboojisaa danta uu keeni karo. Hoggaamiyeha aad rabtaa muxuu baahida taal ka qaban karaa, maxayse tahay baahidu? Baahida ugu xun oo ay soomaalidu maanta qabaan waa in kalsoonidii ay dhexdooda ka baxday iyo in aysan nabad haysan.
Labadaas in aad raadisaa waa ay ka duwan tahay in aad qabiilkaaga ka fakartid iyo in aad nin lacag ku siiyey ama ku siin doona dooratid. In uu qof kasta oo Soomaaliya joogaa nabad ku seexdo iyo in uu qof kasta iyo qabiil kastaa dareemo xasillooni iyo kalsooni sida lagu gaari karo ayaad wax u taageeraysaa ama u dooranaysaa. Caaddifad iyo xinif laguma soo celin karo waxa ka maqan soomaalida.
Hoggaamiyaha aad rabtaa dhaqanka iyo fakarka soomaalida oo dhan intee buu ka og yahay? Deggaamadooda iyo madaxdooda kala duwan wuxuu kala socdaa, sidee buuse ula xaajoon karaa? Duruufaha qallafsan oo ay ka mid tahay in la jillaafeeya sidee buu uga tillaabsan karaa? Dulqaadkiisa iyo samirkiisu sidee bay yihiin markii dhibaato shakhsi ama hawleed ay soo wajahaan? Danta uu u socdo in uu gaaro ama uu saadaaliyo sidee buu ugu guulaystaa? Markii duruuf amar adag u baahan la joogo sidee buu talo adag u qaadan karaa? Nabadda sugiddeeda iyo soocelinteeda sidee buu ugu mintidi karaa? Ciidamo shisheeye haddii la keeno sidee buu uga faa�iidaysan karaa, sidee buuse isugu dubbaridi karaa ciidamo soomaali ah oo ummadda ka saara dhibaatada maanta haysata.
Intaas iyo waxyaalo la nooc ah baa wax lagu taageeraa ama lagu doortaa, ee caaddifadda qabiilooyinka soomaalidu kala qabaan laguma gaari karo dan ummadeed. Haddii aad adiga oo aan su�aalahaas jawaabo u hayn wax dooratid waxaad lugaynaysaa ummadda, waxaadna dooratay ama taageertay Cigaal Shiidaad oo shaki qaba, halkii aad ka taageeri lahayd Wiilwaal oo guul soo hoyin kara.
Qofka la taageero ama aan la taageerin laftiisu waa in uu si sax ah u fakaraa. In aad is sharraxdid ama aad jago u harraadan tahay waa arrin sahlan, laakiin in aad ku guulaysataa waa arrin adag, maxaa yeelay dadka sharraxan baa aad u badan. Soomaaliya oo dhan hal qof baa ku guulaysanaya in uu madaxwweyne noqdo, haddii kale qaran midaysan la heli mayo. Qofkii in uu adiga noqdo waa laga yaabaa, laakiin haddii uusan adiga noqon ka warran?
Bal dadka aan sharraxnayn xagga inaga dhig! Adigu maanta musharrax baad tahay, waxaadna isu qabtaa in haddii lagu doorto ay aad u fiican tahay. Waa run oo aad bay u fiican tahay in lagu doorto maaddaama aad jeceshahay in aad madaxweyne noqotid. Sababta aad u jeceshay baa qiyaasayaa in kasta oo aanan qalbigaaga ogayn! Waa in joornaallada lagugu soo sawiro adiga oo tay xiran oo timaha si fiican laguugu jaray haddii aadan bidaar lahayn oo laguu madoobeeyey haddii aad cirroole tahay. Midda labaad waa in aad la kulantid madax kale. Midda saddexaad soomaalida masaakiinta ah baa kaa fakaraya oo makhaayad kasta magacaaga ayaa oollaan doona, isla markaas maalintaas ka dib xoogaa awood ah baad xagga lacagta iyo xagga fulinta leedahay. Dadka ku doortay waxaa isugu kiin danbaysa markii ay codka ku siiyaan, oo �Nin aad duudtey iyo nin aad dooratayba kuguma ay soo noqdaan�! Codka markii aad ka heshid waa �Macasalaamo�, waayo meeshaan waa la kala xoogsanayaa, oo ilaahay baa kaaga soo sahley in raadiyaha lagaa sheegay adiga oo ereyga �madaxweyne� uu magacaaga ka horreeyo.
Haddii aad sidaas u fakaraysid waxaad tahay nin raba in dhawr maalmood laga sheekeeyo, dabadeedna la caayo ilaa maalinta Qoyaame! Carruurta dhalan doonta ayaa ku caayi doonta, waxaadna tahay maangaab aad u liita. Ummadda soomaaliyeed baad shan sannadood lugayn doontaa, waxaadna ilaahay hortegi doontaa adiga oo saani ah, oo saariq ah, dabadeedna waxaa saljugle ama madaxmadax laguugu tuuri doonaa cadaab aadan ka soo bixi karin oo lagugu qufuli doono, waayo maanta ayaad tahay qof qufulan oo munaafaq ah!
Haddii aan adiga lagu dooran oo lagaa cod bato macneheedu ma aha in lagaa fiican yahay, oo dad codkood laguma qiimeeyo dadka fiicnaantooda iyo liidashadooda. Adduunka ummadaha badankooda waxaa hoggaamiya kuwo aan karti weyn iyo dadnimo miiggan midna lahayn. Qofka codka bixinayaa heerka ay fakarkiisa iyo caddaaladdiisu gaarsiisan yihiin iyo aqoonta uu dadka uu kala doorayo u leeyahay aad bay u hooseeyaan ama aad bay u sarreeyaan, isla markaas ujeeddada wax loo dooranayo waxaa laga yaabaa in uusan isweydiin ee uu adiga ama nin kale isaga jecel yahay si nacasnimo ah, ama uu qof ama qabiil iska neceb yahay.
Haddii nafley sidaada oo kale waji dad leh, oo labo lugood ku socdaa ay kaa cod bato ma xanaaqaysaa? Awal shirka ma waxaad u soo aaddey in adiga lagu doorto keli ah? Haddii aad sidaad u fakaraysid in lagu doorto uma aad qalantid, waayo danta ummadda soomaaliyeed adiga keligaa kuguma ay xirna ee dadka oo dhan baa kula wadaaga. Haddii soomaalida uu qof kastaa dawladnimada ku xiro in uu asagu madaxweyne noqdo yaa shacab noqonaya, yaase jidadka dalka nadiifinaya? Haddii lagaa cod bato waxaa loo baahan yahay dad badan oo ninkii codka helay iyo dawladda la shaqeeya oo taageera, ee maad kuwaas ka mid noqotid si loo helo nabad iyo khayr? Ereyga �khayr� ma wuxuu ku xiran yahay in adiga lagu doorto mase in ay ummaddu midnimo hesho?
Ma og tahay in qofka la doortay laftiisu uu isla fiican yahay sidaad oo kale? Qof kasta ayaa isla fiican! Su�aal baa ku weydiinayaa. Haddii aad aragtid nin jaahil ah, oo nacas ah, oo foolxun, oo qaba naad fiican oo fiican ma waxaad ugu xanaaqaysaa �sidee buu u helay�! Adiga waxba lagaa weydiin mayo sidii uu u helay ee waxaa lagaa rabaa in aad ninkaas miskiinka ah naagtiisa u daysid. Wax �maqaaddiir� la yiraahdo ayaa jira, oo dadka wax dooranayaa maqaaddiir bay raacayaan, waxaana laga yaabaa in ay doortaan qofka ugu karti liita dadka shirka jooga.
Dadka muhiim ma aha in uu hoggaamiyo qofka ugu fiicani ee waxaa muhiim ah in ay midoobaan. Qof kasta oo karti leh dadnimadiisu wax ma ay hirgelin karto haddii uusan haysan ummad midaysan, laakiin qof nacas ah haddii la taageero waxaa shaqaynaysa taageerada iyo midnimada. Dad midaysan waxba kama ay xumaan karaan, dad kala daadsan oo isxumaynayana wax uma ay socon karaan.
Waxaynu xooga ka hor soo ishaarnay in wax kasta oo madax dad iyo labo lugood leh haddii shirka Nayroobi ay xildhibaannada qabiilladu u codeeyaan la taageero si loo yareeyo khilaafka joogtada ah oo ummadda soomaaliyeed soo diloodey. Haddaba taageero qaawani waxba ma ay tarto ee waa in ay jiraan talooyin uu qof kastaa aragti ku leeyahay iyo dano haddii la waayo aysan taageeradu sii jirayn.
Aragtida ay shacabka badankoodu qabaan waa in waxii Nayroobi ka soo baxa markii Soomaaliya lagu celinayo ay xarun ka dhigtaan magaalada Kismaanyo iyo in koofurta Soomaaliya la geeyo ugu yaraan labaatan kun oo ciidamo Afrikaan ah ah. Inta aan barlammaanka iyo dawladda Soomaaliya loo rarin waa in ciidamada Afrikaanka ah iyo ciidamo soomaali ah oo meelaha nabadda ah laga keenay laga soo buuxiyaa gobollada koofurta sida Bay, Bakool, Gedo iyo Jubbooyinka, isla markaas malaysiyooyinka dhulalkaas joogaa hubka ay hayaan gacanta ciidamada la geliyo, ayagana la ciidameeyo haddii ay rabaan.
Lixda bilood oo ugu horraysa haddii aysan xarunta Kismaanyo iyo gabolladii aynu soo sheegnay nabadoobin waxay dawladdu noqonaysaa mid aan ka turjumayn baahida ummadda soomaaliyeed, waxayna taageeradii shacabku isu rogaysaa mucaarid diirran, oo aan dacaayad riqiis ah ahayn ee lagu caddaynayo in aysan madaxda la doortay rabin in ay soo noqoto nabaddii iyo midnimadii Soomaaliya.
Lixdaas bilood ka dib waa in loo soo jeestaa nabadaynta Hiiraan iyo labada Shabeelle iyo in la isku daro ciidamada Soomaaliland iyo Puntland. Markii sannadda 2005 dhammaadkeeda ay hawlahaasi qabsoomaan waxaa loo soo jeesan karaa sidii hubka iyo isbaarooyinka looga xaaqi lahaa Banaaddir ayada oo shacabka la kaashanayo iyo in si sugan loo xaqiijiyo arrimaha fedderaalnimada Soomaaliya.
Arrimaha bulshada waxba lagama qaban karo muddadaas la nabadaynayo degaanka Soomaaliya, mana ay shaqayn karaan hay�ado rasmi ah oo aan ahayn ciidamo, waxaana mudnaanta kowaad lahaanaya heshiisiinta iyo dhammaynta khilaafka ciddii wax hoosta ka tabanaysa sida qabiilooyinka Woqooyiga qaarkood.
Waxyaalahaas oo dhan haddii aan lagu xaqiijin muddo ugu badnaan 2 sannadood ah waxay caddayn u tahay in aysan dawladda iyo barlammaanku daacad ka ahayn in ay Soomaaliya hagaagto, ee ay yihiin kooxo musuqmaasuq ah, oo tumasho iyo tuugnimo ku fushanaya magaca ummadda soomaaliyeed ama dano qabiil oo liita hoosta ka wada.
Haddii ay nabadaynta iyo heeshiisyada soomaalidu sidaas u dhacaan waxaa lagu xijin karaa bidudhiska dalka iyo sidii loola dagaallami lahaa qabyaaladda, oo laga bilaabayo in mustaqbalka dhow la helo barlammaan soomaaliyeed oo ka socda degmooyinka ee aan sida midka xunka ah oo maanta jira qabiil salka ku hayn. Federaalnimada iyo in degmooyinka xorriyad loo siiyo sidii ay xildhibaannadooda kula iman lahaayeen waa in xoogga la saaraa, isla markaas lagu guulaystaa tirakoob run ah oo lagu qanci karo, si ay u dhammaadaan kutirikuteenta iyo caaddifadda qabyaaladdu.
Jidkaas cagaaran oo loo marayo nabadda iyo midnimada soomaalida haddii laga leexdo, annaguna waxaannu ka leexanaynaa jidka taageerada, waxaana lagu raadjoogsanayaa daallin kasta oo magaca soomaalida jeebkiisa iyo jeebka qabiilkiisa ama dabadhilifyadiisa ugu daneeya. Qalinka iyo afkaba waxaannu ku taageeraynaa ciddii marta waddadaas macaan oo aannu kor ku soo sheegnay, ciddii ka leexatana waxaa la tegaya webiyaal qoraallo iyo gabayaal ah oo laga soo afuufo shacabka dulman maskaxahooda iyo dareenkooda.